मोदी भ्रमणको स्थलगत अनुगमनमा आएको हेलिकप्टर निषेधित क्षेत्रमा अवतरण – Anurag Post
Home / अनुराग पोष्ट / मोदी भ्रमणको स्थलगत अनुगमनमा आएको हेलिकप्टर निषेधित क्षेत्रमा अवतरण
मोदी भ्रमणको स्थलगत अनुगमनमा आएको हेलिकप्टर निषेधित क्षेत्रमा अवतरण
Anurag Post May 2, 2018	अनुराग पोष्ट, अन्तराष्ट्रिय, प्रवासी, राजनीति Leaveacomment 545 Views
काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणमा वैशाख २८ र २९ आउने भएको छ । मोदी भारतबाट हेलिकोप्टर चढेर सोझै जनकपुर अवतरण गर्ने कार्यतालिका बनेको छ।
मोदी भ्रमणको लागि पूर्व तयारीको स्थलगत अनुगमन हुन थालेको छ । मंगलबार जनकपुरमा गृहमन्त्री गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अनुगमन गरेका छन् ।
मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्व तयारीको स्थलगत अनुगमन लागि मंगलबार भारतीय बायुसेनाको हेलिकप्टर काठमाडौँ आएको छ । हेलिकप्टर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निषेधित क्षेत्रमा अवतरण गराइएको छ । जनकपुर र मुक्तीनाथको रेकी गर्न भारतीय वायुसेनाको विमान लिएर भारतीय विशेष सुरक्षाा समूहका कर्नेलको नेतृत्वको टोली हेलिकप्टरमा नेपाल आएको हो ।
भारतीय विशेष सुरक्षाा समूहका महानिरीक्षक जेठूवा अस्तीनै नेपाल आइसकेका छन् । उनी आउनुअघि नै भारतले उनको सुरक्षाका लागी भन्दै रेकी गर्न भारतीय सेना परिचालन गरिसकेको छ । मङ्गलवार काठमाडौँ आएका बायुसेना आज जनकपुर र मुक्तिनाथ रेकी गर्न जाने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी काठमाडौँ नआई सिधै जनकपुर किन आउदैँछन् ?
यही वैशाख २८ देखि नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउन लागेको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सिधै जनकपुर आउने भएका छन् । मोदी काठमाडौँ नआई सिधै जनकपुरमा उत्रन लागेका हुन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पटनाबाट हेलिकोप्टर चढेर सिधै जनकपुर आउनेछन् र त्यहाँ जानकी मन्दिरमा पूजा गर्नेछन् । मोदी जनकपुर उत्रिने भएपछि थापाले सुरक्षा अवस्थाबारे जनकपुरमा अवलोकन गरेका छन् । मोदी काठमाडौँ नभई सिधै जनकपुरमा उत्रने भएपछि गृहमन्त्री थापाले सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन निर्देशन समेत दिएका छन् ।
मोदी सवार विमान धनुषाको जनकपुरस्थित बाह्र बिघामा अवतरण हुने त्यहाँ नेपाल सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले स्वागत गर्ने र त्यसपछि धार्मिकस्थल जानकी मन्दिरमा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मोदीले संयुक्त रूपमा रामायण परिपथको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्यालले जानकारी दिएका छन् । बाह्रविघामा नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । त्यसपछि मोदी काठमाडौँ आउनेछन् र मुक्तिनाथको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौँ नआई सिधै जनकपुर आउने हुँदा विभिन्न शङ्का उत्पन्न हुन थालेको छ । नेपाल सकरकारलाई भन्दा पनि मधेस केन्द्रि दलहरूलाई धेरै प्राथमिकता दिएका त हैनन् ? मोदीले जनकपुर, काठमाडौँ हुँदै मुक्तिनाथको भ्रमण गर्नेछन् ।
Previous मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न, ‘सीमा मिच्दा किन बोल्नुहुन्न ?’ यसरी पैसा उठाउदै सामुदायिक स्कुलहरु (भिडियोसहित)
Next दुई घण्टे मोदीको जनकपुर भ्रमणमा जनकपुरको साँचो मोदीलाई बुझाउने तयारी !